မေ့သွားတဲ့ Android Lock Screen ကို ဘယ်လို ကျော်မလဲ ? - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > မေ့သွားတဲ့ Android Lock Screen ကို ဘယ်လို ကျော်မလဲ ?
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 3:43 AM Android Tutorial, နည်းလမ်းများ
[ZawGyi]ဖြင့်ဖတ်ရန်Android Device ကို PIN Code , Pattern များဖြင့် ကာကွယ်ထားသူများအတွက် မေ့သွားတဲ့ အခါမှာ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ Lock Screen ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းများ ရှိပါတယ်။ အဲဒီနည်းလမ်းများထဲက အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
[Unicode]ဖွငျ့ဖတျရနျမသှေ့ားတဲ့ Android Lock Screen ကို ဘယျလို ကြျောမလဲ ?
မေ့သွားတဲ့ Android Lock Screen ကို ဘယ်လို ကျော်မလဲ ? Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 3:43 AM Rating:5[ZawGyi]ဖြင့်ဖတ်ရန် Android Device ကို PIN Code , Pattern များဖြင့် ကာကွယ်ထားသူများအတွက် မေ့သွားတဲ့ အခါမှာ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ ဒါေ...